စာဖတ်အားနည်းနေတဲ့ ကျွန်တော်တို့ – Live the Dream
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တစ်နေ့တာအချိန်တွေကို သုံးစွဲကြတဲ့အခါ စာဖတ်ခြင်းအတွက်ဆိုတာ ပါရဲ့လား? ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်က လူငယ်တွေနဲ့ သူငယ်ချင်းတော်တော်များများမှာတော့ စာဖတ်တဲ့သူခပ်ရှားရှားရယ်.. ကိုယ်တိုင်လည်းအပါအဝင်ပဲလေ။ ဘာကြောင့် စာမဖတ်ဖြစ်တာလဲ? ဆိုတာကတော့ ငယ်ငယ်က စာဖတ်ကျင့်မရှိလို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်.. စာဖတ်ရတာ ပျင်းတယ်ဆိုတဲ့သူတွေလည်းရှိမယ်.. စာဖတ်ခြင်းထက် အခြားသော ဖျော်ဖြေရေးပစ္စည်းတွေ၊ Social Media သုံးခြင်း၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်း၊ သီချင်းနားထောင်ခြင်း၊ Game ဆော့ခြင်းတွေနဲ့ပဲ အချိန်ကုန်သွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒီလိုနဲ့ပဲ ဖတ်မယ်ဆိုပြီး ဝယ်ထားသမျှ စာအုပ်တွေလည်း တစ်ချို့ချောင်ထဲရောက်.. တစ်ချို့ ဖုန်တွေတက်လို့ပေါ့နော်…
ဒီလိုလုပ်နေလို့ ဒီတစ်သက်တော့ စာအုပ်ဖတ်ခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကို ကြားရင်သာကြားဖူးမယ် ကိုယ်တိုင်ခံစားဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဒီလိုမဖြစ်ရလေအောင်.. စာဖတ်ခြင်းကြောင့်ရလာမယ့်အကျိုးကျေးဇူးတွေနဲ့ ဘာကြောင့် စာဖတ်သင့်လဲ? ဆိုတာကို ဆွေးနွေးလိုပါတယ်..
၁။ စာအုပ် က ဘာလဲ?
A book isabag of words. စကားလုံးတွေထည့်ထားတဲ့ လွယ်အိတ်လေးတစ်လုံးပါ။ ဒီစကားလုံးတွေထဲမှာ သင်ခန်းစာယူစရာ ဖြစ်ရပ်မှန် ဘဝအတွေ့အကြုံ၊ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေပေးတဲ့ အသိပညာ၊ ပညာရှိတွေရဲ့အတွေးအခေါ်၊ အသစ်သော လေ့လာတွေရှိမှုများ၊ သမိုင်းဖြစ်ရပ်များနဲ့ စိတ်ခွန်အားဖြစ်စေမယ့် အရာတွေပါဝင်ပါတယ်။ သည်စကားလုံးတွေက မသိသေးတဲ့အရာသိလာစေဖို့၊ ဗဟုသုတတွေကျယ်ပြန့်စေဖို့၊ သင်ခန်းစာယူကြဖို့၊ လက်တွေ့ဘဝတွေမှာအသုံးချနိုင်ဖို့ အတွက် ကျွန်တော်တို့ကိုအကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။ မသိတဲ့အရာကို သိလိုက်ရလို့ ရလာတဲ့ ဝမ်းသာပီတိ၊ လက်တွေအသုံးချပြီး ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်လို့ ရလာတဲ့ပျော်ရွင်မှု တွေက အသန့်ရှင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် စာအုပ်တစ်အုပ်ဆိုတာ ကိုယ့်ရဲ့ လမ်းပြ၊ ကိုယ့်ရဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးဖော်၊ အားပေးဖော် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်လိုပါပဲ။
စာအုပ်တွေတိုင်းတော့ ကောင်းတာချည်းပဲလဲမဟုတ်ပါဘူး…တစ်ချို့စာအုပ်တွေက လူတွေရဲ့အတွေးအမြင်ကို တစ်ဖက်စောင်းသွားစေဖို့၊ အယူအဆအမှားတွေရစေဖို့ အထိအောင် အဆိပ်ဖြစ်စေတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။ ဒီတော့ စာဖတ်တဲ့နေရာမှာလည်း ကိုယ့်အနေနဲ့ သေချာဆက်စပ်စဉ်းစားပြီး ယူသင့်တာကိုယူ ပယ်သင့်တာကို ပယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ စာကောင်းပေကောင်းတစ်ခုကို ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ? လို့မေးလာရင်တော့ မင်မင်အနေနဲ့ စာများများဖတ်ပါလို့ပဲပြောပါရစေ… များများဖတ်လေလေ ဘယ်စာတွေက ကိုယ့်အတွက်အဆိပ်ဖြစ်စေလဲ? ဘယ်စာတွေက ကိုယ့်အတွက်အကျိုးဖြစ်စေလဲဆိုတာကို သိမြင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
၂။ စာဖတ်ခြင်းနဲ့ ဦးနှောက်
ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာအောင် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရသလိုပဲ ဦးနှောက်ကျန်းမာအောင် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရပါတယ်။ လေ့လာတွေ့ရှိမှုတွေအရ စာဖတ်ခြင်းက ဦးနှောက်အတွက် အကောင်းဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုထဲက အပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ စာထဲမှာ ရှိတဲ့စကားလုံးတွေကို ဖတ်ရတယ်။ စိတ်ကူးကြည့်ရတယ်. တွေးခေါ်ရတယ် စသည်ဖြင့် စာဖတ်နေတုန်းမှာ ဦးနှောက်ထဲမှာရှိတဲ့ အမြင်အာရုံရော၊ စကားလုံးမှတ်သားမှုဆိုင်ရာရော၊ ဆက်စပ်တွေးခေါ်မှုတွေကို တစ်ပြိုင်တည်းအလုပ်လုပ်ကြတယ်။ ဒီကနေတစ်ဆင့် စာဖတ်သူတွေက အမြင်အာရုံဆိုင်ရာမှာအားကောင်းတာ၊ ဆက်စပ်တွေးခေါ်မှုတွေနဲ့ စကားအပြောအဆို၊ စကားလုံးအသုံးအနှုန်း စသည်အားဖြင့် သာမာန်စာမဖတ်သူတွေထက်အများကြီးသာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချက်အလက်ကလည်း မင်မင်ထင်သလို လျှောက်ရေးထားတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး.. သိပ္ပံပညာရှင်များကိုယ်တိုင် ရှာဖွေတွေ့ရှိထားတဲ့အချက်အလက်တွေပါနော်. သက်သေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်အနီးအနားမှာ ရှိတဲ့ စာဖတ်သူတွေနဲ့ စာမဖတ်သူတွေကြားမှာ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင်လည်း အလျှင်းသားကြီးမြင်နိုင်ပါတယ်။
၃။ စာဖတ်ခြင်းနဲ့ ဘဝ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပုံမှန်လည်ပတ်တဲ့ဘဝကို ယေဘုယျအားဖြင့် စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်.. အလုပ်အကိုင်တွေ၊ ကျောင်းကိစ္စတွေမှာသာမက မိမိပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ အနီးအနားက လူတွေကြောင့် စိတ်ညစ်ရတာ၊ စိတ်ဖိစီးရတာမျိုးတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါတွေကို ကုစားနိုင်ဖို့ အမျိုးမျိုးသောအရာတွေနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဖျော်ဖြေကြပါတယ်. ရုပ်ရှင်ကြည့်တာ၊ game ဆော့တာ၊ သီချင်းနားထောင်တာ ကစလို့ မူးယစ်ဆေးဝါးတွေနဲ့စိတ်ဖြေတာ၊ မကောင်းတဲ့အရာတွေနဲ့ စိတ်ဖြေတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်. ဒါတွေက မကောင်းဘူးလို့ တပ်အပ်မဆိုချင်ပေမယ့် များလွန်းရင် ကိုယ့်အတွက်ဆိုးကျိုးတွေအများကြီးရှိလာနိုင်ပါတယ်။ Game ဆော့လွန်းတာ၊ ဖုန်းကြည့်လွန်းတာတောင်.. မျက်လုံးတွေ ဦးနှောက်တွေ ထိခိုက်နိုင်တယ်ဆို ကျန်တဲ့ မကောင်းတဲ့အရာတွေ ထည့်တွက်စရာမလိုလောက်အောင် ဆိုးရွားလှပါတယ်။
ဒီလိုအရာတွေကို အစားထိုးနိုင်ဖို့ မင်မင်အနေနဲ့တိုက်တွန်းလိုတာက စာအုပ်ဖတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ လေ့လာတွေ့ရှိမှုတစ်ခုမှာတော့ စာဖတ်ခြင်းက ကော်ဖီသောက်ခြင်း၊ သီချင်းနားထောင်ခြင်း၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်း၊ Game ဆော့ခြင်းတွေထက် ပိုပြီးတော့ စိတ်ဖိစီးမှုကို လျှော့ကျစေပါတယ်တဲ့။ မင်မင်ကတော့ အလုပ်တွေပင်ပန်းတာပဲဖြစ်ဖြစ် စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ စိတ်ဖိစီးတာပဲဖြစ်ဖြစ် စာအုပ်ထဲစိတ်နှစ်သွားရင် ဝမ်းနည်းစရာတွေကို မေ့ပျောက်တဲ့အခါမျိုးတွေ၊ ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းဖို့အဖြေတွေ့သွားမျိုးတွေ၊ အတွေးအသစ်တွေရရှိပြီး စိတ်ခွန်းအားပြန်လည်ရရှိလာတာမျိုးတွေကို ကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့ဘူးပါတယ်. ကိုယ်တိုင်ခံစားကြည့်ချင်ရင် ကိုယ့်ရဲ့ Entertainment ကိစ္စကို စာဖတ်ခြင်းဘက် အပြောင်းအလဲလုပ်ကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။
၄။ Challenge ခေါ်ပါဦး?
ကျွန်တော်တို့ စာဖတ်အားနည်းတာကို သိတော့သိတယ်.. ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်း သူလိုကိုယ်လိုပဲဆိုတော့… အကျင့်ကောင်းကို မမွေးဖြစ်ဘူး။ စာဖတ်အားနည်းတဲ့တိုင်းပြည်က ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု နှောင့်နှေးတဲ့တိုင်းပြည်တစ်ခုပါလို့ စာထဲမှာလည်း ဖတ်ဖူးပါတယ်။ လက်တွေ့ဘဝမှာလည်း ကျွန်တော်တို့ စာဖတ်အားနည်းတဲ့သူမျိုးတွေ… တစ်ဖက်နိုင်ငံက စာဖတ်သူကြီးတို့ရဲ့ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းအောက်မှာ အောက်ခြေအလုပ်တွေကို လုပ်နေကြရပါတယ်။ မြင်အောင်ကြည့်ရင်တော့ မြင်နိုင်ပါတယ်…ပြင်ဖို့သိရင်လည်း ပြင်နိုင်ပါတယ်။ စာဖတ်ခြင်းအလေ့အကျင့်ကို မွေးရတာခက်ပါတယ်။ ခက်တဲ့အရာကိုမှ Challenge ရတာ ခေတ်စားနေတဲ့အခုအချိန်မှာ စာဖတ်ခြင်းကိုလည်း Challenge ခေါ်ကြပါဦး.. စာဖတ်ရုံနဲ့ တစ်ဦးချင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကစလို့ တိုင်းပြည်အကျိုးပြုသူတစ်ယောက်၊ လူအများရဲ့အကျိုးအတွက်ဦးဆောင်သူ တစ်ယောက်လည်းဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။